FASAL CANAB "ATAMAN" - VITICULTURE
Canabyo maalmahan waxay joogsadeen inay noqdaan wax qalaad ama aan la geli karin.
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhirta, taas oo ka duwan midba midka kale, labadaba muuqaal iyo dhadhan.
Mid ka mid ah waa Ataman.
Sharaxaada canab ah Ataman
Tani waa natiijada naas-nuujinta hiwaayadda, isku-duubista waxaa lagu helaa kala-goynta noocyada Rizamat iyo Talisman. Sida muuqaalka, rucubyadu waa weyn, leeyihiin qaab cylindrical, celcelis cufan. Mass waa kala duwan yahay 600 ilaa 800 g, laakiin kooxaha qaarkood waxay gaari karaan culeys dhan 1200 g.
Berry wuxuu noqon karaa mid weyn oo aad u ballaaran, tiro ka mid ah kala duwanaanta min 12 ilaa 16 g. Kala duwanaanshahan waxaa lagu gartaa qaab muuqaal ah oo midab leh, midab guduudan casaan ah. Qorraxda, midabku wuu isbeddelaa oo wuxuu noqonayaa midab madow. Berry waxay leeyihiin diirka dhuuban, daboolay dermin qafiif ah. Grapes Ataman waxay leedahay hilib casiir leh oo leh dhadhan isku dhafan.
Kala duwanaanshahan waa mid caan ku ah celceliska wakhtiga Baaskiilka, 130-145 maalmood. Ataman leeyahay awood koritaanka sare. Buundada ayaa awood leh, iyada oo tiro badan oo caleemo ah, in ka badan kala bar oo midho u dhali kara.
• Midhaha Ataman waa kuwa ugu weyn.
• Kooxuhu waxay leeyihiin tayada badeecadaha sare, si fudud u beddela gaadiidka
• Burburinta qulqulka waxaa lagu qiyaasaa in uu dhexdhexaad yahay.
• Kala duwanaanshuhu wuxuu leeyahay dhalid sare xitaa xaaladaha cimilada xun.
Wuxuu u baahan yahay hoyga xilliga qaboobaha.
Hababka beeritaanka canab
Iyadoo la beerto geedi socodka, mid ayaa dhali kara geedo qoryo hal sano ah ama kuwa cagaarka ah. Waxay ku xiran tahay waqtiga soo degidda. Xaaladda kowaad, waqtiga soo degitaanka waa bartamihii Abriil - bartamihii bishii May, iyo dhammaadka labaad ee dhammaadkii May - dhammaadkii Juun. Ataman, sida noocyada kala duwan ee canabka, waxay jecel yihiin diirimaad, sidaas darteed, jawiga ku haboon, way ka dhaqso badan tahay mid kale.
Haddii aad rabto in aad ku beeri canab ku dhow derbiga guri ama dhismo kale, ka dibna duurka u wanaagsan oo la dhigo dhinaca koonfureed. Sidaas darteed, geedka canabka ah wuxuu heli doonaa kulaylka dheeraadka ah habeenkii, natiijadu waxay noqon doontaa muuqaalka hore ee midhaha. Haddii aad go'aansato in beertii beerta beertii beerta ka samaysan lahayd, ka dibna waa inaadan beeran duurka this kala duwan ee canabkuna wuxuu u dhow yahay dhirta, tan iyo xididdada Aamiin waxay ka maqan tahay qoyaanka sababtoo ah nidaamka xididka geedka.
Heerkulka ugu hooseeya ee Ataman u adkeysan karo waa -23 ° C, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad hoy ka dhigto meel hoy ah oo duurka ah.
Canab waxay u baahan tahay qoyaan, gaar ahaan xilliga kulul, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad biyo u daadiso amar go'an. Waraabinta beerta canabka ah waa lagama maarmaan si ay biyaha u faafaan qoto dheer oo dhan nidaamka xididka. Sidaa darteed, isticmaalka biyaha la qiyaasay wuxuu noqon doonaa 7-10 baaldiyo. Waxa kale oo suurtagal ah in loosen lakabka ugu sareeya ee dhulka hoostiisa, si ay hawadu u sii fiicnaan karto socodka.
Beerta canabka ah waa in la mulched xilli ka hor waxaa la dhigay si ay geedo ku koraan ciidda bacrin ah. Dhulku waa inuu si fiican u kululaanayaa ka hor inta aan la dubin. Waxaad sugi kartaa baahida heerkulka 10-12 ° C ama fiiri canab. Marka indhaha ay Bloom, aad mulch karaa. Mulching, waxaad isticmaali kartaa peat, caws, digada, polyetylen madow iyo qalabka kale.
Qalabaynta waa in la sameeyaa si loo ilaaliyo duurka xilliga qaboobaha. Waxaad dabooli kartaa dhulka, filim iyo qalab kale. Marka aad daboolayso, waxaad u baahan tahay inaad soo saarto geedka canabka ah ee dhulka, ku rid caleemaha qallalan oo ku dabool dhulka, ama ku dabool dabool caag ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la rusheeyo madaxa baadiyaha si fiican dhulka leh si ay si fiican u ilaaliyaan xididada ka soo dhaxan. Marka la daboolayo filim, waxaa lagama maarmaan ah in laga tago farqiga hawada iyo inta lagu guda jiro dhalada si loo furo filimka.
Canab sida Ataman, waa inaad gooyaa hoygiisa hortiisa. Cabbirka duurka waa in uu ahaado 55-60 indhood, iyo canabki la jarjarey siiyay 8-10 indhood.
Cuntada noocaan ah waxay u baahan tahay nafaqooyin sida nitrogen, fosfooraska, zinc iyo kuwa kale. Marka lagu daro Bacriminta caan ah sida cagaarka, bacrimin macdanta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa, sida chloride potassium, ammonium nitrate, superphosphate, iyo kuwa kale. Sida waqtiga bacriminta, waa in la sameeyaa guga ka hor furo duurka u jiilaalka ka dib, iyo inta lagu guda jiro ubax iyo Bisaylkiisa ee duurka.
In kasta oo xaqiiqda ah in Ataman uu leeyahay heer dhexdhexaad ah oo caabuq ah ee caabuqyada fungal, marka hore, koorsooyinka waa in laga ilaaliyo cudur sida fungal sida oidium. Astaamaha ugu muhiimsan ee caabuqa waa ubax cadaan ah oo caleemo ah. Wixii "daaweyn" waxaad isticmaali kartaa hababka nafleyda iyo kiimikada labadaba. Qaababka bayoolojiga ah waxaa ka mid ah in lagu buufiyo duurka iyagoo leh ciribtirka sulfur, boodhka biyaha boodhka ah, iyo kuwa kale.
Qalabka kiimikada, fangasidyada noocan ah sida strobe, vectra, basezol iyo kuwo kale ayaa loo isticmaalaa.
Sidoo kale canab qurux badan ayaa looga baahan yahay in laga ilaaliyo cudurada ugu xun ee fungal - xayr. Calaamad waa calaamadaha jilicsan ee huruudka ah ee caleemaha. Si loola dagaallamo cudurkan, daroogooyinka ay ku jiraan copper waxaa loo isticmaalaa: Isku darka Bordeaux, Chloride copper iyo kuwa kale.